Ngonxantathu engcanjisiweyo Fence egobile
Ucingo lwe Welded Mesh luguqulelo olunoqoqosho lwenkqubo yocingo, eyakhiwe ngeplanga yocingo lwesinyithi eneeprofayili ezinde ezibumba ucingo oluqinileyo. Iphaneli yocingo ifakwe nge-high quality yocingo oluphantsi lwekhabhoni yentsimbi, umphezulu uphathwe nge-polyostatic polyester powder spray coating over materials galvanized. Emva koko qhagamshela iphaneli yocingo ngeposi ngeziqwengana ezifanelekileyo. Ngenxa yobume bayo obulula, ukufakwa ngokulula kunye nokubonakala okuhle, abathengi abaninzi nangakumbi bajonga uthango locingo oluthambileyo njengocingo olukhethwayo oluqhelekileyo.
Inja yezinja e-Australia
Iikheji zezinja ze-1.2 * 1.8 okanye i-1.5 * 1.8m. Umthengi unokuyihlanganisa njengemfuno.
Kwikheji yenja, khange ibe nayo ikheyiji, kodwa ikhaya lenja, inja inokuba nendawo enkulu kuyo.
Ngobukhulu bendlu yenja, wamkela umthengi ukuba enze ngokwezifiso, kwaye singakunika njengemfuno yakho.
Ikheji igqityiwe kwaye sisebenzise umnatha wocingo olwenziweyo ukuyenza. Inokuthintela ikheyiji okanye injana ngaphandle kwehoko, nangaphezulu, inokukhusela abantu ukuba bakhuseleke ngakumbi.
Umnyango osicaba kwimarike ubhekisa kumnyango osicaba ngaphandle kwenkqubo ye-conavex, eyaziwa njengecwecwe lephepha lomnyango wokhuni oluqinileyo, olwenziwe ngomthi waseTshayina. Isiseko somnyango sizaliswe sisiseko esomeleleyo esiqinileyo. Umphezulu wolusu lwephepha oludityanisiweyo lomnyango wokhuni wenziwe ngegxolo elenziweyo. Ubunzulu be groove bunzulu, kwaye ulusu lwephepha luxelisa ukuthungwa kwenkozo yomthi.
I-Spear-top picket ucingo oku ngokusebenzisa isitayela sepikethi ngomkhonto ocinezelweyo onxiba umphezulu awuniki kuphela ukubukeka kweklasikhi ngegama lawo, ikwayenye yezocingo lwealuminium ethandwayo macala onke, izisa umtsalane obonakalayo okhangayo kwipropathi yakho . Ipikethi ephezulu yomkhonto
Ucingo yenye yezokuhombisa ngakumbi, ukubiyela ngentsimbi kwintengiso kwaye iyafumaneka kwi-2 okanye kwi-3 i-rails enokukhetha uloliwe ongaphantsi, ngokunjalo. Amakhonkco okuhombisa kunye nemisongo zinokongezwa ngenkangeleko yokuhombisa nangakumbi.
Isicelo: Ngaba unqumle isinyithi sekhabhoni, intsimbi engenasici, ubhedu, ialuminiyam kunye neminye imibhobho kunye neeprofayili, ezinje: ityhubhu, umbhobho, umbhobho ovaliweyo, umbhobho oxande, i-H-beam, i-I-beam, i-engile, ijelo, njl njl. esetyenziswa ngokubanzi kwiintlobo ezahlukeneyo zemibhobho yokuqhubekeka kweprofayili, icandelo lokwakha iinqanawa, ubume benethiwekhi, intsimbi, ubunjineli baselwandle, imibhobho yeoyile kunye namanye amashishini. Iimveliso Intshayelelo: Olu hlobo locingo lwenziwe ngesinyithi socingo kunye nombhobho wentsimbi. Kucingo olubiyele kulula ...
1. Iinguqu ezahlukeneyo zombala, ukuqonda kwanamhlanje kunye nokudlala ubuntu kunye neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo oluhlaza.
2. Umphezulu wemveliso ugudile kwaye uqaqambile, awunapeyinti, enokuthintela iziphumo ezibi zerhasi eyityhefu esemoyeni nokwenzakalisa umzimba womntu emva kokusebenzisa ezinye izinto zokuhombisa.
3. Xa sele yenziwe, ixesha lokwakha lifutshane, oko kukuthi, ulwamkelo luyakonwabela kwaye iphupha lifezekiswe kwangaphambili.
4. Ipeyinti yokuhombisa izinto zasimahla eziphuculweyo kusetyenziswa ubuchwephesha bemveliso yamanye amazwe kunye nezinto ezisemgangathweni ezikumgangatho ophezulu zokungenisa zinezibonelelo zokuchasana nefuthe, ukutsha okungazenzekiyo, ubungqina benundu, ubungqina bokufuma, ulondolozo olulungileyo, olungeyityhefu, olungenancasa kunye nongcoliseko- simahla.
5. Ulwakhiwo lukulungele, olunokusikwa, lusarhwe, lwenziwe kwaye lubethelelwe.
6. Ngokobunikazi bakho, imeko-bume, ubuntu, ukungcamla ukutshintsha iintlobo ezahlukeneyo, zezona zinto zilungele umhombiso wasekhaya kunye nokuhombisa ngaphakathi.